Kedu ohere zuru oke iji nwekwuo backlinks?
Njikọ njikọ bụ akụkụ dị mkpa nke mgbasa ozi ọ bụla kachasị mma dị ka njikọ ndị dị n'èzí na-eweta okporo ụzọ na ego na-enweta na weebụsaịtị ma na-eme ka ikike ya dịkwuo elu n'ile ụgbọelu ọchụchọ. Backlinks na-eje ozi dị ka votu maka azụmahịa n'ịntanetị, ma ọ bụrụ na ha sitere na ikikere isi weebụ, ha na-akpaghị aka ghọọ ihe dị ike na-enye gị na saịtị ahụ karịa uru. Backlinks nwere ike ime ka ọbụlị ma ọ bụrụ na ị nwere ike ikwupụta na TOP nke SERP maka ọchụchọ ọchụchọ.
Otú ọ dị, n'ime ụwa dị adị, ọ bụghị ihe niile backlinks ka e kere. Ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ ji eche otú e si eme ka ọnụ ọgụgụ nke azụlinks dị na weebụsaịtị ha. Backlinks nke sitere na saịtị ndị a ma ama na gburugburu ihe ndị na-eme nnyocha na-enye aka ga-eme ka ị nweta okporo ụzọ na-akwụ ụgwọ na-eto eto na azụmahịa gị. Mgbe ị na-emepe mgbasa ozi ụlọ njikọ gị, ị ga-ama ụzọ ndị ị ga-esi zere iji gbochie nkwụnye ụgwọ Google na nhazi ọkwa gị.
Ntuziaka Webmaster nke Google
Tupu ịmalite ịchọ ohere iji wuo mmachi azụmaahịa gị, ị ga-agafe Google Webmaster Guidelines nke kọwara ihe ị na-eme bụ ndị na-ejikọta njikọ ụlọ ndị ị na-adịghị mkpa iji tinye na mgbasa ozi kachasị mma. Google na-atụ aro ka ị zere nkwụsị na njirimara na-adịghị mma. Iji kpebie ndị na-adịghị agbaso ụkpụrụ nduzi ndị a, Google mepụtara ama ama Penguin melite na saịtị ndị a na-akwụ ụgwọ na-ekere òkè na ọrụ ụlọ ọrụ aghụghọ.
Nkọwa ndị na-esote njikọta njikọ ndị na-esonụ Google na-ekwu n'ụzọ doro anya iji zere:
enweghi ọdịnaya mbụ ma ọ bụ obere ọdịnaya;
njikọ na-ezo n'ime ederede, dị ka ederede na font size 0;
igwe ma ọ bụ ndị na-eme nchọpụta aghụghọ.
M na-akwado gị ka ị ghara ịdaba na omume aghụghọ ndị a ma ghara imekọ ihe na ebe nrụọrụ weebụ na-eme ha iji zere njikọ dị ka spam.
Dichapụkwa backlinks dị ala
Iji mee ka njirimara backlinks gị dịkwuo elu, ị gaghị elelị ike nke Google Disavow tool. Idozi akwụkwọ nkwado dị iche iche na-enye gị ohere izere ịbụ ndị ejikọta na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ nwere spammy. Ogologo azụmaa mara mma nke na-ezo aka na saịtị gị nwere ike ịpụta n'ọnọdụ dị iche iche. Mgbe ụfọdụ, spammy backlinks nwere ike ibili n'ihi gị osompi omume megide gị na saịtị. Ọzọkwa, ọ na-eme mgbe agadi backlinks adịkwaghị adị n'ihi na rebsnding website. Google na-akọwa otu esi egbochi backlinks, n'ihi ya ha anaghị emetụta ọnọdụ gị. Ozugbo ịchọtara ndị backlinks kwesịrị ekwetaghị, ịkwesịrị ịmepụta faịlụ na ndepụta ndị e nwetara na bulite ya na Google Webmaster Tool.
Ugbu a, ị maara ihe azụlinks ịchọrọ iji zere na otu esi eme ya site n'enyemaka nke Google, ya mere i nwere ike ịmụta usoro ndị dị mma iji meziwanye ọnọdụ saịtị gị na ịmepụta ndị ọzọ backlinks na saịtị ndị ọzọ.
Otu esi eme ka ọnụọgụ abụọ dị mma?
Akwụsịla ịmepụta echiche ọhụrụ maka ọdịnaya dị ka enwere ohere dị mma nke nwere ike inyere gị aka ịmepụta otutu nke backlinks ọhụrụ. Ịkwesịrị ịchọta ọdịiche ọdịnaya na saịtị gị ma mara mgbe niile banyere nke ọhụrụ ahụ. Enwere ụfọdụ nhọrọ maka ịchọta gaps na ntanetị nke nwere ike ịdị oke ka ị na-eme otu nyocha saịtị ebe ị na-eji ngwaọrụ nyocha ihe nchọgharị iji depụta URL gị niile ma ọ bụ na-achọ site na ọdịnaya iji hụ ihe ị na-ekwughị banyere ma.
Iji chọta ohere ọhụụ ọhụrụ, ịnwere ike iji ọrụ ọrụ nyocha ndị ọkachamara dị iche iche. M na-akwado tinye n'ọrụ Moz Pro na . N'iji ngwaọrụ ndị a, ị nwere ike ịlele ọkwa maka ibe ndị nwere isiokwu dị mkpa na nyocha ọchụchọ kwa ọnwa maka okwu ọchụchọ ndị a.
Ozugbo ịchọtara usoro mmepụta isiokwu gị ugbu a, ị nwere ike ịmalite ịchọ ọchụchọ ndị metụtara ya. Mkpụrụokwu ọhụrụ dị mkpa ga-enye gị ohere ịmepụta ọdịnaya ọhụrụ maka saịtị gị. Jide n'aka na isiokwu ndị ị họpụtara ga-aba uru n'ahịa gị ma nwee nnukwu mmụgharị (ọbụlagodi 1,000 kwa ọnwa). Otú ọ dị, okwu ọchụchọ ndị a ekwesịghị ịbụ oke asọmpi dịka ị gaghị enwe ike iji ya maka uru gị.
Chọọ maka ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma
Iji mee ka ikike backlinks dịkwuo, ịkwesịrị ịchọta ebe nrụọrụ weebụ dị ike na niche gị. Ebe nrụọrụ ndị a ekwesịghị ịbụ ndị na-asọ mpi na-aga ahịa n'ahịa gị, ma ọ dịkarịa ala akụkụ ụfọdụ metụtara ụlọ ọrụ gị. Ụdị backlinks ndị dị otú a nwere ike inyere gị aka ịmepụta ndị ahịa nwere ike, bulie PageRank ma melite mmata gị. Ị nwere ike ịlele njirimara weebụsaịtị, ọkwa, ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa na ndị ọzọ metric na-eji Semalt Website Analyzer . Ịkwesiri ileba anya na ọnụọgụ ụzọ ndị na-egosi ma ebe nrụọrụ weebụ ga-aba uru maka ịba ụba azụ na ibe ma ọ bụ.
Ikwesiri itinye nlezianya anya na njirimara weebụsaịtị dịka:
pasent nke ndị ọbịa na-abịa na weebụsaịtị sitere na mpaghara dị iche iche;
njiko aka nke ukwu - ọnụego bounce, onye ọrụ na-emefu na saịtị, nchịkọta ụbọchị, na ndị ọzọ);
pasent nke okporo ụzọ ọchụchọ okporo ụzọ na ụzọ ntụgharị aka;
isiokwu dị n'elu site na engines ọchụchọ.
Mpempe akwụkwọ ndị a ga-emechi ọchụchọ gị, na-enye gị ndepụta nke ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma ndị nwere mmetụta kachasị na ịmepụta na ịdebe backlinks maka saịtị gị.
Bulie echiche ọdịnaya
Ugbu a, mgbe ị nwetara ndepụta nke ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma, ọ bụ oge iji nweta ego backlinks si ha site na-enye ihe na-akpali akpali na-eme nnyocha na ọdịnaya. Ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke igosipụta ọdịnaya gị na weebụsaịtị ndị ọzọ a maara nke ọma bụ ịme ka mmụba gị mara ma gosipụta ya na ndị na-ege ntị ọhụrụ.
Ọ bụrụ na ị kpebie iziga ọdịnaya gị maka njikọta ụlọ na saịtị ndị ọzọ, jide n'aka na ọ ga-adaba na ntụziaka ndị biputere ndị ọbịa ma dabara na ndị na-ege gị ntị chọrọ. Ị nwere ike ịkụnye ihe ndị ọzọ dị na weebụsaịtị ma ọ bụ nyefee ndị ọbịa.
Ya mere, ọ bụrụ na ị ga-ebipụta ọdịnaya dị mma nke nchọpụta nwere njikọ njikọta nke dị na mpaghara gị, ị ga-eme ka okporo ụzọ gaa na saịtị gị ma bulie aha gị dịka onye ndu ndú n'etiti ndị ahịa gị, ndị nwere ike ịbanye n'ime akwụ ụgwọ gị Source .